Xukuumadda Kumeelgaarka Ah oo Canbaareysey Shirka Wadatashiga ee Nairobi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xukuumadda Kumeelgaarka Ah oo Canbaareysey Shirka Wadatashiga ee Nairobi
Lataliyaha Raysalwasaare Farmaajo, Eng. Yariisow
Golaha Xukuumadda kumeelgaarka ah ayaa shir ay maanta isugu yimaadeen ku canbaareeyey kulanka wadatashiga ah ee Qaramada Midoobey u qabatay maamulada Soomaalida, waxaana warsaxaafadeedka si gaar ah loogu canbaareeyey Guddoomiyaha Baarlamaanka, iyada oo golaha wasiiradu tilmaameen in ay horseedi karto bur-bur ku yimaada laamaha dastuuriga ah ee Dawladda. War uu saxaafadda u akhriyey Eng. Cabdiraxmaan Cismaan Yariisow La taliyaha sare ee Raysalwasaraaha Xukuumadda kumeelgaarka hoos ka akhri:
Dhegayso iyada oo cod ah
Shir ay isagu yimaadeen Golaha Wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha XFKMG ah Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed ayaa looga hadlay shirka ka bilowday Nairobi, Golahu waxey isku raaceen arrimahan:
Axdiga Fedraalka KMG ah. Axdiga ayaa si cad u qeexaya in Dowladda FKMG ah, hay’adiisa fulinta ay mas’uul ka tahay siyaasadda iyo dhaqangelinta.
Geedi socodka nabadda Jabuuti waxuu sidoo kale dib u xaqiijineysaa hay’adaha FKMG ah inay yihiin aasaaska wadajirka Soomaaliya, taasoo la doonayo inay beesha caalamku ku dhaqmaan xaalad kasta iyo waqti walba ee geediga nabadda.